Indlu yamaplanga enechibi/ulwandle, indawo yokubasa umlilo, neWiFi! - I-Airbnb
Indlu yamaplanga enechibi/ulwandle, indawo yokubasa umlilo, neWiFi!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTony
I-Nest 's Nest yindlu yamaplanga etofotofo ekufutshane ne-Alpine Lake, nayo yonke into oyidingayo kwiholide yakho.
- Hamba imizuzu eyi-15 ukuya kwi-Alpine Lake ukuze uqubhe, ukuloba nokuqesha isikhephe
- Yonwabela ulwandle lwabucala, ipuli yangaphakathi, indawo yokuzilolonga kunye ne-mini-golf -- zonke simahla!
- Dlala igalufa kwindawo ephumeleleyo yegalufu eyi-18 eneehektare eziyi-2 000 zehlathi kunye nechibi eliyi-150-acre
- Phuma uze ugrill kwiveranda, okanye upheke iivenkile ezijikeleze umngxuma womlilo
- Bukela iimuvi okanye ufowune ngevidiyo kwi-WiFi ekhawulezayo onokuyifumana
- Shayela imizuzu eyi-40 ukuya kwi-Wisp Ski Resort okanye kwi-Deep Creek Lake
Indlu yethu yamaplanga elungele intsapho igcwele izinto ezinokusetyenziswa nezonwabisayo izibini, iintsapho okanye amaqela amancinci abahlobo.
Indlu yamaplanga iquka:
- amagumbi okulala ayi-2 + indawo yokulala ye-loft (iibhedi ezine zizonke)
- Iveranda enkulu kunye neyadi enkulu enendawo yokugalela inyama, umngxuma womlilo, kunye ne-teepee/inqaba yabantwana
- I-WiFi ekhawulezayo eyaneleyo yokubukela iimuvi kwiTV nokubamba iifowuni zevidiyo
- Ikhitshi elinento yonke elinomatshini wokuhlamba izitya, isitovu/ioveni,
ne-microwave - Iiyunithi ze-AC kwigumbi lokulala nakwigumbi lokuhlala
Indlu yethu yamaplanga yinxalenye yeAlpine Lake resort, enazo zonke izinto ezinokusetyenziswa ngasechibini. Sihamba nje imizuzu embalwa ukusuka echibini ngokwalo, apho ungaphumla khona elunxwemeni, uphume uyokuqubha, uye kuloba, okanye ukhuphe isikhephe. Ichibi lingaphezu kwee-acre eziyi-150, ngoko zininzi iindawo onokuzibuka.
Ichibi lase-Alpine linezinye izinto onokuzenza (zonke simahla!), kuquka:
- Ipuli yangaphakathi (ivuliwe unyaka wonke)
I-Mini-golf - Indawo yokuzilolonga
- Ithenisi, i-basketball, kunye neenkundla
ze-pickleball - Iindlela zokunyuka intaba (kunye nokutyibilika ekhephini ebusika)
Ichibi lase-Alpine linendawo yokudlala igalufa enemigangatho eyi-18. Ixesha leti linokubhukishwa ibe amaxabiso nokufumaneka kuyahluka ngamaxesha athile onyaka. Yonwabela ukuba phandle kweNtshona yeVirginia kwindawo entle eyenziwe ngamaplanga echibini!
Kwaye eyona nto imnandi: zonke ezi zinto zinokusetyenziswa zisavulekile ngexesha leCOVID!
Wonke umntu uqinisekile ukuba uza kufumana into emnandi anokuyenza nokuba leliphi ixesha lonyaka. Kwaye ngoxa sisondele kakhulu kwinto yonke, unokubuyela kwindlu yamaplanga ukuze uzipholele ehlathini.
Sisoloko sibazisa abantwana bethu ababini abancinci kunye nenja kwindlu yamaplanga kunye nathi, ngoko siyintsapho- kwaye siyayifanelekela inja.
Ngaphaya kwendlu yamaplanga nayo yonke into eAlpine Lake, siyayithanda indlela esikufutshane ngayo neDawn Creek Lake neWisp Ski Resort -- kokubini kumgama wemizuzu eyi-40 kuphela. Izinto onokukhetha kuzo ehlotyeni nasebusika!
Ezakutshanje ngeCOVID: siwuthatha nzulu umngcipheko we-coronavirus, kwaye sithathe amanyathelo okuqinisekisa ukuba uyakwazi ukonwabela ngokupheleleyo ukuhlala kwakho:
- Sisebenzisa ispreyi sokubulala iintsholongwane kuzo zonke iindawo nemiqheba (iminyango, izixhobo zombane) kunye neetawuli zamaphepha ezilahlwayo kuphela xa sicoca
- Abantu bethu abacocayo bahlamba izandla zabo ngokukhawuleza xa befika kwindlu yamaplanga
- Ukuba umntu ococayo ubonisa iimpawu zokugula, uza kuhlala ekhaya ibe akavumelekanga kwindlu yamaplanga
Siyathemba ukuba ulonwabele uhambo lwakho, kwaye sifuna uhlale usempilweni! Ukuba kukho nantoni na, ngoku lixesha elingcono kunangaphambili lokuya ehlathini!
Izimvo eziyi-1 897